Home News Xil K.Galbeed”Shariif Xasan Iyo Xukumada Waxa ay doonayan Burburinta Golaha Shacabka”
Xil K.Galbeed”Shariif Xasan Iyo Xukumada Waxa ay doonayan Burburinta Golaha Shacabka”
Xildhibaanada Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ee laga soo doortay deeganadda Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa ku eedeeyay Madaxweynaha Maamulkaas Shariif Xasan Shiikh aadan Mooshinkii laga keenay Gudoomiye Jawaari.
Tiro Xildhibaano ah oo xalay Saxaafadda kula hadlay Muqdisho waxa ay sheegeen in ay hayaan cadeymo muujinaya in Shariif Xasan uu ka dambeeyo mooshinka ka dhanka ah Jawaari, islamarkaana Xukuumadda Soomaaliya heshiis ay ku yihiin.
Xildhibaan C/fitaax Ibraahim Geeseey oo kamid ah Xilhibaanadda Baarlamaanka Federaalka Soomaliya oo ugu horeyntii warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ay raaligalin ay ka bixinayaan hadalkii kasoo yeeray xildhibaano kasoo jeeda koonfur Galbeed Soomaaliya oo sheegay in Jawaari uusan u qalmin Xilka Gudoomiyaha Golaha shacabka.
Waxa uu Sheegay in Xildhibaanadaas ay yihiin kuwa uu laaluushay Madaxweynaha koonfur Galbeed Soomaaliya.
Sidoo kale waxa uu sheegay in Shariif Xasan Shiikh aadan uu damacsan yahay marka laga soo tago mooshinka jawaari, in uu burburiyo Golaha Shacabka baarlamaanka Federaalka Soomaaliya.
Xildhibaanada Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ee laga soo doortay deeganadda Maamulka Koonfur Galbeed Soomaliya ayaa labo dhinac u kala jabay iyadoo garab kamid ah ay taageersan yihiin in xilka laga qaado Gudoomiye Jawaari.